Mampiditra ny fiarovana an-tambajotran-tserasera ho ao anatin’ny fandaharanasam-panjakàna any Makedonia Avaratra ireo fitarainana mikasika ny fijirihana tenimiafina · Global Voices teny Malagasy
Mantanjaka toa inona ilay "Tafika Grika Mahery" " nilaza ho nijirilka?
Voadika ny 13 Jolay 2020 7:46 GMT
Ministeran'ny Fitantanambola ao amin'ny Repoblikan'i Makedonia Avaratra, ao Skopje. Sary avy amin'i Meta.mk, nahazoana alalana.
Ity tantara ity dia mifototra amin'ny tatitra nataon’ny Meta.mk News Agency, ilay mpiara-miasa amin'i Global Voices, izay tetikasan'ny Orina Metamorphosis.
Any Makedonia Avaratra, mety ho tsy nahatratra ny tarigetrany ny fijirihana iray izay nikendry ireo adiresy imailaka sy tenimiafin'ireo tomponandraikitra ao amin'ny governemanta. Saingy kosa, nahatonga ny filaminana an-tserasera ho lohahevitra noresahina nandritra ny fotoana fohy nanerana ny firenenailay andrana.
Vao haingana no nohidian‘ny Twitter ny kaonty miafina izay nitondra ny anarana hoe “Tafika Grika Matanjaka”, izay namoaka tamin'ny 10 Mey ny failo soratra iray nahitàna, araka ny teniny, ireo imailaka sy tenimiafin'ireo mpiasa ao amin'ny Ministeran'ny Fitantanambola sy Toekarena Makedoniana .
Voajirika ny Ministeran'ny Toekarena & Ministeran'ny Fitantanambola ao “Makedonia” #PGA . Rohy ahitàna ireo rakitra fototra NAVOAKA : https://t.co/4xcyCtXtjO
(ahitàna ny tenimiafina & imailak'ireo mpiasa rehetra)
— Powerful Greek Army (@PowerfulArmyGR) 10 May 2020
Na izany aza, nolavin'ny governemantan'ny Repoblikan'i Makedonia Avaratra haingana ilay filazàna, ary nanamarika izy ireo fa tsy nahatafavoaka afa-tsy ireo tenimiafina izay efa tsy nampiasaina intsony ireo mpijirika raha ny tena marina.
Ny ampahany amin'ireo adiresy imailaka ireo dia efa tsy niasa nandritra ny taona maro nanomboka tamin'ny tsy niasan'ny tompony intsony teny anivon'ireo Ministera ireo, ary efa tranainy na efa novaina efa ho fito taona no mihoatra izay ny tenimiafin'ireo adiresy imailaka navoaka ireo. Tsy afaka hidirana amin'ny alalan'ireo tenimiafina navoaka ireo ireny kaonty tsirairay ireny sy ny vata fandraisany imailaka.
Tsy misy rakitra tsiambaratelo very : governemanta.
Tao anatin'ny fanambarana iray hafa tamin'ny haino aman-jery, nohazavain’ny Minisitry ny Toekarena, Kreshnik Bekteshi, fa “tsy nisy fahavoazana nitranga” tamin'ny rafitry ny Ministera ary nomarihany fa efa nilaza taminy ny departemantan'ny IT fa tsy nisy rakitra tsiambaratelo voaroba.
Mbola nanambara ihany koa ilay Minisitra fa efa nohavaozina avokoa ny rafitr'ireo ministera roa ireo amin'ny tolotra imailaka ofisialy ary efa nohasarotina ny tenimiafin'ireo adiresy imailaka ofisialy, miaraka amin'ireo fitanana an-tsoratra mandrafitra ny fiarovana an-tambajotran-tserasera izay mampihena ny risika ateraky ny fijirihana ireo rafitra.
Tao anatin'ny fanambarany voalohany, nomarihan'ny Governemanta fa tafiditra ao anatin'ny Tetikady sy Drafitrasa Nasionaly momban'ny Fiarovana An-tambajotran-tserasera izany asa fanamafisana ny rafitra IT eny anivon'ny andrim-panjakana izany.
Na izany aza, tsy nahasakana ireo kaonty mpanohitra tsy hampiasa ilay tabataba ho porofon'ny tsy fahaizandraharahan'ny antoko am-perinasa izany, ireto farany izay ahitana ny mpikambana ao amin'ny tafika mpaneson'ny VMRO-DPMNE.
Tsy resaka manokana ireo, ry vendrana, fa imailaka ofisialin'ny ministeran'ny Toekarena sy ny Fitantanambola. Iza no ho voatonona ho tomponandraikitr'ity bashi-bazouk [fitantanana tsy misy fifehezana na mikorontana] ity
Nanandrana ny hanafana ny toedraharaha ny haino aman-jery akaiky an'ity antoko politika ity, toy ny Alfa TV an'ny Hongariana sy ny tranonkala express.mk miara-miasa aminy, tamin'ny alalan'ny lohateny mampihetsi-po tsy voamarina, toy ny hoe “Misavoritaka ny mpiasa, miditra an-kery amin'ireo [ministeran'ny] fitantanambola sy ny toekarena ireo Grika mpijirika.”
Ny fanehoankevitra toy izany, ankoatra ny zava-misy hoe azo inoana fa niseho nandritra ny taona 2006 ka hatramin'ny 2017 ny fanitsakitsahana rehetra izany nisy, fony nahateo amin'ny fitondrana ny antoko VMRO-DPMNE.
Eny tokoa, nandritra ireo telo herinandro taorian'ny nitrangan'ilay fiahiahiana fijirihana, tsy nisy nanome porofo izay mety handiso ny filazan'ny governemanta hoe efa ho fito taona raha kely indrindra ilay lisitranà tenimiafiina navoaka.
Saika ho tamin'izany vanim-potoana izany ihany, nirehareha ny kaonty Twitter-n'ny @PowerfulArmyGR fa nahajirika tranonkalanà toeram-pianarana Makedoniana roa ary namoaka pikantsarin'ireo voalaza fa pejin-tranonkala nohetraketrahany.
Na izany aza, nisalasala nanoloana ireo rakitra famantarana navoakan'ireo mpijirika avy ao amin'ilay “Tafika Grika Mahery” ny Makedoniana mpampiasa Twitter sasany, izay manondro fa afaka narafitra tamin'ny alalan'ny fijirihana tany aloha ilay lisitra.
Nanambara ny fisalasalany manoloana ny tsy nanamarinana tamin'ny fomba tsy miandàny ny zom-pirenen'ireo mpijirika mihitsy ny sasany, izay nilazan‘ny mpampiasa sasany fa mety ho asan'ireo miaramila kelin'ny mpanohitra na vahiny mpitsikilo izany.
Ahoana no hahafantarantsika fa Grika izy ireo, raha toa ka mety hoe Rosiàna mpijirika izay mody miafina ho toy ny Grika mba hanaovana fanafihana mifangarao amin'ny firenentsika, ary amin'ny fanaovany izany, dia sady fanafihana ny OTAN koa?
Ny ankamaroan'ireo feo tamin'ny tambajotra sosialy kosa nifantoka tamin'ny fahatsoran'ny sasany tamin'ireo tenimiafina sy ny zavatra nambaran'izy ireo mikasika ny mpamorona azy ireny.
Nampirehidrehitra manokana ny tambajotra sosialy ny iray tamin'izy ireo, dia ny — “cicecice” (vakiana hoe tseetse) adika amin'ny teny anglisy toy ny “tittit’ na “boobboob” — tenin-jatovo entina hilazàna ny nonon'ny vehivavy.
Enter password: / Ampidiro ny tenimiafina:
Password to weak ⛔️ / Tenimiafina marefo loatra
Password accepted✅ / Tenimiafina voaray
Ampidiro ny tenimiafina:
Tenimiafina marefo loatra ⛔️
Tenimiafina voaray ✅
Farafaharatsiny, mpampiasa Twitter iray no mba nivonona ny hanolotra ny tombontsoan'ny fisalasalàna ho an'izay mpiasan'ny Ministeran'ny Fitantanambola, na mpiasa taloha izay.
Nilaza i @alter_gella fa mety ho čiče no tian'ilay mpitantana ny kaonty ho tenenina, teny izay midika hoe “dadatoa” ary saika hitovy fanoratra, fa vakiana hoe chiche.
Makedonia 3 andro izay